Iindaba - "IVeki yokuKhuthaza uKhuseleko lwezoNyango kuZwelonke" Ukuthengwa kwesayensi kunye nokufanelekileyo kwezixhobo zonyango
Izixhobo zonyango zibhekisa kwizixhobo, izixhobo, izixhobo zokusebenza, in vitro diagnostic reagents and calibrators, materials, kunye nezinye izinto ezifanayo okanye ezinxulumene noko ezisetyenziswe ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo emzimbeni womntu, kubandakanya isoftware yekhompyuter efunekayo. Into eluncedo ifunyanwa ikakhulu ngeendlela zomzimba, hayi kwi-pharmacology, kwi-immunology, okanye kwimetabolism, okanye nangona ezi ndlela zibandakanyeka kodwa zidlala indima encedisayo. Injongo yokuchonga, ukuthintela, ukubeka iliso, ukunyanga okanye ukunciphisa izifo; ukuxilongwa, ukubeka iliso, unyango, ukunciphisa okanye ukusebenza kwembuyekezo yokulimala; ukuhlolwa, ukutshintshwa, ukulungiswa okanye ukuxhaswa kwezakhiwo zomzimba okanye iinkqubo zomzimba; inkxaso yobomi okanye ulondolozo; ulawulo lokukhulelwa; Nika ulwazi ngeenjongo zonyango okanye zokuchonga isifo ngokuvavanya iisampulu emzimbeni womntu. I-Lanzhou Municipal Supervision Bureau ikhumbuza abathengi ukuba kufuneka bamamele izimvo zoogqirha ngaphambi kokuba bathenge izixhobo zonyango zasekhaya kwaye bazisebenzise phantsi kolwalathiso loogqirha. Enye yezi zinto zilandelayo kufuneka ihlawulwe xa kuthengwa izixhobo zonyango ekhaya:
Abathengi bathenga izixhobo zonyango kumayeza rhoqo ezikhemesti nakwimizi-mveliso yeshishini lezixhobo zonyango ezifumene "iLayisensi yeShishini lesiXhobo sezoNyango" kunye "nesiQinisekiso seRekhodi yeShishini lesiBini soNyango lesiBini".
02 Jonga isiqinisekiso semveliso
03 Jonga imiyalelo
Ngaphambi kokuthenga isixhobo sonyango, abathengi kufuneka bafunde ngononophelo incwadana yemveliso, bacacise indlela yokusebenza, ubungakanani besicelo, indlela yokusetyenziswa, izilumkiso, Izimo, njl njl, kwaye bayisebenzise ngokufanelekileyo ngokusekwe kwiingcebiso zikagqirha kunye neemeko zabo.
Abathengi kufuneka bafumane ii-invoyisi zokuthenga xa bethenga izixhobo zonyango ukukhusela amalungelo abo.
Iimaski zonyango zezodidi lwesibini lwezixhobo zonyango, kwaye kufuneka kufunyanwe isatifikethi sobhaliso lwezixhobo zonyango kunye nelayisensi yemveliso, kwaye inombolo yobhaliso kunye nenombolo yelayisensi yokuvelisa kufuneka iphawulwe kwiphakheji.